" ပေါငျကွားမှာ စှဲတဲ့မှို " - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကွီးကွီးမားမားရောဂါမဟုတျပမေယျ့ အငျမတနျမှဒုက်ခရောကျရတဲ့ပွသနာကတော့ ပေါငျခွံပေါငျကွားထဲမှိုစှဲပွီး ယားယံတဲ့ပွသနာပါ။ယားကလညျးအလှနျယား…. လူကွားသူကွားထဲ ကုတျလို့ကောငျးတဲ့နရောလညျးမဟုတျတဲ့ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျနရောကွီး..မကုတျတော့လညျး ယားပွီးရငျးယား…အဲ့မှာစတှတေ့ာပါပဲ။ အိမျရောကျလို့ အားရပါးရကုတျတော့မယျလို့ကွညျ့လိုကျရငျ အရပွေားတဈဝိုကျဟာ နီရဲနမေယျ၊အဖတျအဖတျတှကှောနမေယျ၊ပကျကွားအကျနမေယျ၊တောကျလြှောကျယားနေ…ကုတျလယေားလဖွေဈနမေယျ၊စပျဖငျြးဖငျြးခံစားရမယျ။
ဒီလိုမှိုစှဲရတဲ့အကွောငျးရငျးကတော့…မှိုတို့ရဲ့သဘာဝအတိုငျး စိုထိုငျးမှုကိုကွိုကျတယျ။ပုံမှနျလူတှရေဲ့အရပွေားမှာလညျး သာမနျမကျြစိနဲ့မမွငျနိုငျတဲ့မှိုတှေ သဘာဝအလြောကျရှိနတေတျတယျ။ယားလားဆိုတော့ မယား၊လူကိုဒုက်ခမပေးဘူး။ဒါပမေယျ့ အပျေါကပွောခဲ့သလို လူတဈယောကျမှာ စိုထိုငျးစမြားလာပွီဆိုရငျ မှိုတှကေပုံမှနျဓာတျပိုပှားလာပွီး ယားယံခွငျးကိုဖွဈစပေါပွီ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး စိုထိုငျးတဲ့ အဝတျအစားတှမေလဲဖွဈတဲ့အခါ၊ မစိုမခွောကျအဝတျအစားတှဝေတျတဲ့အခါ၊ရခြေိုးပွီး ရစေငျအောငျမသုတျတဲ့အခါ၊အဝလှနျသူတှမှော အရပွေားအတှနျ့အခေါကျမြားလို့ ခြှေးအောငျးနတေဲ့အခါမြိုးမှာ စိုထိုငျးမှုတှမြေားလာပွီး မှိုတှပေေါကျပှားဖို့ အားပေးသလိုဖွဈလာပါတယျ။
မကုဘဲထားမယျဆိုရငျ ပေါငျခွံပေါငျကွားမှတဈဆငျ့ ဝမျးဗိုကျ၊တငျပါးမြားဆီသို့ ပြံ့နှံ့ယားယံနိုငျပါတယျ။ကုသဖို့ကလညျး မခကျပါဘူး။ဆေးဆိုငျမှာ ဝယျလို့ရတဲ့ မှိုသတျဆေးလိမျးဆေးခရငျမျ/အမှုနျ့ တဈမြိုးမြိုးကို ဆေးညှနျးအတိုငျး ပုံမှနျလိမျးပေးမယျ၊တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေး အလေးပေးမယျ၊ရပေုံမှနျခြိုးမယျ၊ရခြေိုးတဲ့အခါတိုငျး ဆပျပွာသခြောတိုကျမယျ…ကွိုကွိုကွားကွားတှပေါမကနျြတိုကျမယျ၊ရခြေိုးပွီးတဲ့အခါ တဈကိုယျလုံး ခြောငျကွိုခြောငျကွားတှပေါရခွေောကျအောငျသုတျမယျ၊အဝတျအစားသနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့ဝတျမယျ၊အရမျးကပျြထုပျနတေဲ့အဝတျအစားတှအေစား လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့ ခြောငျခြောငျခြိခြိလေးတှဝေတျမယျ…ဒီလိုဆို အခြိနျတိုအတှငျး ဒီပွသနာကိုဖွရှေငျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
အကယျ၍ အထကျပါအခကျြတှအေတိုငျးလိုကျနာသညျ့တိုငျအောငျ နှဈပတျကွာသညျအထိ မကောငျးသေးဘူး၊ယားမွဲယားမယျ၊ပိုပိုဆိုးလာမယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ပွသတိုငျပငျဖို့လိုအပျပါတယျ။
” ပေါင်ကြားမှာ စွဲတဲ့မှို “
ကြီးကြီးမားမားရောဂါမဟုတ်ပေမယ့် အင်မတန်မှဒုက္ခရောက်ရတဲ့ပြသနာကတော့ ပေါင်ခြံပေါင်ကြားထဲမှိုစွဲပြီး ယားယံတဲ့ပြသနာပါ။ယားကလည်းအလွန်ယား…. လူကြားသူကြားထဲ ကုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်တဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နေရာကြီး..မကုတ်တော့လည်း ယားပြီးရင်းယား…အဲ့မှာစတွေ့တာပါပဲ။ အိမ်ရောက်လို့ အားရပါးရကုတ်တော့မယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင် အရေပြားတစ်ဝိုက်ဟာ နီရဲနေမယ်၊အဖတ်အဖတ်တွေကွာနေမယ်၊ပက်ကြားအက်နေမယ်၊တောက်လျှောက်ယားနေ…ကုတ်လေယားလေဖြစ်နေမယ်၊စပ်ဖျင်းဖျင်းခံစားရမယ်။
ဒီလိုမှိုစွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့…မှိုတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်း စိုထိုင်းမှုကိုကြိုက်တယ်။ပုံမှန်လူတွေရဲ့အရေပြားမှာလည်း သာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မှိုတွေ သဘာဝအလျောက်ရှိနေတတ်တယ်။ယားလားဆိုတော့ မယား၊လူကိုဒုက္ခမပေးဘူး။ဒါပေမယ့် အပေါ်ကပြောခဲ့သလို လူတစ်ယောက်မှာ စိုထိုင်းစများလာပြီဆိုရင် မှိုတွေကပုံမှန်ဓာတ်ပိုပွားလာပြီး ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေပါပြီ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး စိုထိုင်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေမလဲဖြစ်တဲ့အခါ၊ မစိုမခြောက်အဝတ်အစားတွေဝတ်တဲ့အခါ၊ရေချိုးပြီး ရေစင်အောင်မသုတ်တဲ့အခါ၊အဝလွန်သူတွေမှာ အရေပြားအတွန့်အခေါက်များလို့ ချွေးအောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ စိုထိုင်းမှုတွေများလာပြီး မှိုတွေပေါက်ပွားဖို့ အားပေးသလိုဖြစ်လာပါတယ်။
မကုဘဲထားမယ်ဆိုရင် ပေါင်ခြံပေါင်ကြားမှတစ်ဆင့် ဝမ်းဗိုက်၊တင်ပါးများဆီသို့ ပျံ့နှံ့ယားယံနိုင်ပါတယ်။ကုသဖို့ကလည်း မခက်ပါဘူး။ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ မှိုသတ်ဆေးလိမ်းဆေးခရင်မ်/အမှုန့် တစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်၊တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး အလေးပေးမယ်၊ရေပုံမှန်ချိုးမယ်၊ရေချိုးတဲ့အခါတိုင်း ဆပ်ပြာသေချာတိုက်မယ်…ကြိုကြိုကြားကြားတွေပါမကျန်တိုက်မယ်၊ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွေပါရေခြောက်အောင်သုတ်မယ်၊အဝတ်အစားသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ဝတ်မယ်၊အရမ်းကျပ်ထုပ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေအစား လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ချောင်ချောင်ချိချိလေးတွေဝတ်မယ်…ဒီလိုဆို အချိန်တိုအတွင်း ဒီပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ အထက်ပါအချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာသည့်တိုင်အောင် နှစ်ပတ်ကြာသည်အထိ မကောင်းသေးဘူး၊ယားမြဲယားမယ်၊ပိုပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။